Hacuuccan meediyaa dhiibbaa siyaasaa geessiisa, Oromoo beekkadhu – Awash Times
Hacuuccan meediyaa dhiibbaa siyaasaa geessiisa, Oromoo beekkadhu
March 4, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Duulli mediyaa Oroomof dhimma Oromootirratti akka baname kan beekne bubbuulleerra. Waan Oromoo maqaa dhahate hundaa mediyaan Afaan Amaaratiin hojjetan kan mootummaas ta’ee kan dhuunfaa hingabaasan yookan aallaa isaa gabaasu. Oromoon hamma fedhe yoo dhugaa qabaates mediyaa jaraa hingabaasu. Kuni EBC (ETV), Fana, Walta, ESAT, Asrat, Qaanaa dabalatee gara TV 30 gahan yoo ta’an dhimma Oromoo kan gabaasu garuu OMN, BBC Afaan Oromoo ONN fi OBS akkasumas dhiyoo kana FIB. Mediyaan maqaa Oromootin maallaqa ummata Oromootin socho’u OBN yeroo ammaa gara mediyaa jaraa goree jira. Dhimma mootummaan leellisu malee dhimma saba Oromoo hingabaasu.
Mee dhugaan haqaaf falmachuu qabsoo Fayyisaa Leellisaa caale maaltu jira? Ummata Tophiyaa hunduu cunqursaa jala jiran jedhee falme, dubbate Fayyisaan. Gaafa inni biyya galu mediyaan jaraa tokko dhufee?
Egaa yeroo sanirraa mediyaa Afaan Amaaraatin hojjetan akka Oromoorratti duulan ifaadha. Dhimma aadaa, siyaasaf seenaa akkasumas mirga Oromoo laallatu hingabaasan.
Yeroo falmiin Mana Lubooma Oromiyaa fi Sinodosii Tophiyaa jidduutti ta’u gaafa jalqabaa OBN mediyaalee Oromoo kaan waliin gabaasee san booda biraa hafe. Kan Afaan Amaaratiin hojjetan garuu gama tokko qofa gabaasan, kuun immoo gama kan Oromoo balaaleffatu.
Mediyadiyaalen jaraa kuni kan jiraatan harka irra caala diinagdee Oromootini. Oromoo waan isaa tamsaasan daawwataa, itti fayyadama. Abbootin qabeenyaa keenya beeksisa kan afaan jaraatirraan dabarfatu. Kana jechuunis horii itti baasa, isaa duromsee akka isaan hojii ofii itti fufan taaisa. Mediyaalen Afaan Amaaratiin hojjetan ifaan ifatti Oromoo siyaasaaf diinagdee biyyattii keessaa baasudhaaf hojjetu.
Kuni dhaabbachuu qaba. Akkuma meediyaalen jaraa dhimma Oromoo ugguruuf hojjetan Oromoonis mediyaalee kana ofirraa ugguruu maaltu dhoowwe? Yoo mediyaa afaan jaraa dhiisee kan ofiititti fayyadame, tajaajila ofii argate mediyaan afaan Oromoo jabaachaa, heddummaachaa deemu. Akkasiin humna mediyaa kana deeffachuu dandeenya. Kuni dirqama Oromoo hundaati.
Mee suuraa kana lemaan walbira laalaa. Gaaddisa Hoggana Oromoo kan dhaaboliin ummata kana hunda bakka bu’an haasa’aniif dhaabbata nama muraasaa kana Balderas mediyaa gabaasuf dhufe walbira qabaa laala.
Previous Post: Police Must account for missing Oromo opposition leader Abdi Ragassa says Amnesty International
Next Post: Egypt closely following Ethiopia’s activity, even military equipment purchases